बिरालोले बाटो काट्यो भने के अशूभ हुन्छ ? या हुदैन ? कुकुरको ७ गतिविधिको कारणले अशुभ संकेत दिन्छ
पोखरा । हामीले बिरालोले बाटो काट्यो भने त्यो अशूभ भयो भन्दै दुःख मनाऊ गर्छौ र बिरालोले बाटो काटेको देखेपछि हामी जहाँको त्यही अडिन्छौ जबसम्म अन्य मानिसले त्यो बाटो काट्दैन तबसम्म हामीले त्यो बाटो काट्दैन । अन्य मानिसले बाटो काटिसकेपछी मात्र हामी त्यो बाटो आफ्नो गन्तव्यतर्फ हिड्छौ ।
नाक बन्द भयो ? यी विधि अपनाउनुस्